Toetry ny andro: mbola hitohy ny hatsiaka be | NewsMada
Efa lasa nifindra toerana amin’ireo Nosy manakaiky antsika ilay rivotra mitondra hatsiaka be fa nisolo tsioka atsimo mangatsiaka sy maina indray. Mbola hitoetra ny maripana ambany izay nidina manodidina ny 3° ka hatramin’ny 6°C amin’ny tokony ho izy amin’izao vanim-potoana izao ho an’ny tapany atsimo, araka ny fanambaran’ny tomponandraiktiry ny famantarana ny toetry ny andro, Randrianarison Rivo, omaly. Tany Fianarantsoa, 4°C ny maripana ambany indrindra, omaly, izay 2°C ny fahatsapan’ny olona azy.
Anio, hahatsapa hatsiaka be koa ny tapany avaraty ny Nosy. Eto an-dRenivohitra, hilatsaka hatrany amin’ny 6°C ny maripana ambany indrindra raha 16°C kosa ny ambony indrindra.
Efa ao anatin’ny atiririnina tanteraka isika ka tokony hiomanana ny tsirairay, indrindra ireo manana aretina mitaiza sy ireo marefo toy ny zokiolona sy ny zaza marefo amin’ny taovam-pisefoana.
Nanamarika ny teknisianina fa namirifiry kokoa ny andro ririnina tamin’ity taona ity raha mitaha ny tamin’ny taon-dasa noho ny fidinan’ny maripana amin’ny tokony ho izy. Ho an’ny roa andro lasa, nanakaiky ny tombana navoakan’ny mpamantatra ny toetry ny andro ny maripana ambany indrindra niseho.
Nidina ny maripana ambany indrindra
Momba ny toetry ny andro anio, varatraza malefaka ny mandrafitra ny toetry ny andro. Handrivotra ny andro saika manerana ny Nosy ary hidina be ihany koa ny maripana, indrindra ny tapany atsimon’ny Nosy, Antsirabe, Ambatolampy, i Fianarantsoa.
Tsy mbola azo atao koa ny miandriaka fa mbola hanonja be ny ranomasina hatramin’ny anio.
Hanomboka ny alakamisy sy zoma vao hisy fiakarany ny maripana ambony fa tsy hihoatra ny 20°C izany ho an’ny eto amin’ny faritry ny afovoan-tany. Hahazo orana ny tapany maraina any Diana, any Antalaha, any Analanjirofo ary erika kosa ho an’ny ilany atsinanan’i Matsiatra Ambony sy Ihorombe. Maina ny andro ho an’ny faritra sisa. Ny hariva, hitohy ny erika ho an’ny ilany atsinanan’Amoron’i Mania sy i Matsiatra Ambony ary Ihorombe. Ho an’ny maripana, 3°C ny any Vakinankaratra ary hahatratra 31°C ny any Antsohihy, any Maevatanana, any Mahajanga.